Ny sakafo mineraly mahomby amin'ny voly ririnina - gazety "Potato System".
Alena Arkhangelskaya, tale lefitra ara-barotra ho an'ny fanohanana agronomika, PhosAgro-Volga
Ny voamaina amin'ny ririnina dia zava-dehibe amin'ny fanatanterahana ny asa fampitomboana ny famokarana voa, satria manana vokatra avo kokoa izy raha oharina amin'ny voam-boankazo.
Ny endri-javatra iray amin'ny fivoaran'ny voly ririnina dia ny vanim-potoanan'ny fitomboana maharitra ary ny fizarana ny tsingerin'ny fiainan'ny zavamaniry ho dingana roa lehibe. Ny voalohany dia mianjera amin'ny fararano: manomboka amin'ny famafazana ka hatramin'ny fanala maharitra. Ny faharoa dia havaozina amin'ny lohataona ary mifarana amin'ny fiforonan'ny sofina sy ny fahafatesan'ny zavamaniry. Ny vokatra amin`ny ririnina voamadinika mitovy hatraiza dia miankina amin`ny toetry ny Mazava ho azy fa ny vanim-potoana roa.
Amin'ny fararano amin'ny ririnina, ny dingana vernalization dia mitranga amin'ny vanim-potoana fararano-ririnina. Ny iray amin'ireo antony lehibe manomana ny zavamaniry amin'ity dingana ity dia ny sakafo mineraly voalanjalanja.
Ny fanomezana ny zavamaniry amin'ny habetsahan'ny phosphore sy potasioma ilaina amin'ny fitondrana hafanana tsara sy ny halavan'ny andro tsara indrindra dia manampy amin'ny fizotry ny fizotran'ny fanamafisana sy ny fahazoana ny fahamendrehana amin'ny ririnina sy ny fanoherana ny fanala. Ny hamafin'ny ririnina amin'ny zavamaniry dia miankina betsaka amin'ny fahafahan'ny protoplasma mitazona rano. Ny fitsipiky ny fitondrana rano dia manilika ny fahafatesan'ny voly amin'ny ririnina noho ny tafahoatra na ny tsy fahampian'ny hamandoana. Ny Phosphorus dia mandrindra ny fifandanjan'ny rano amin'ny zavamananaina, manatsara ny fidiran'ny rano ary mampiroborobo ny fananganana rafitra faka matanjaka. Raha jerena fa ny fitomboana sy ny fananganana ny rafitra faka faharoa dia mitohy mandra-pahatongan'ny dingana voalohany, ny zavamaniry dia mila phosphore avy amin'ny tsimokaretina ka hatramin'ny fananganana sofina.
Hatramin'ny efatra herinandro, ny voankazo tanora dia maka phosphore bebe kokoa avy amin'ny zezika ampiharina, ary avy eo, miaraka amin'ny fananganana rafi-pamokarana mandroso, avy amin'ny tany. Mandritra izany fotoana izany, ny hanoanana phosphore mandritra io vanim-potoana io dia mitarika ny fihenan'ny vokatra voa amin'ny 30-37%. Ny tsy fahampian'ny endrika phosphore misy mandritra ny dingan'ny vernalization manontolo dia mitarika ho amin'ny tsy fahombiazan'ny fijinjana voa, fa miaraka amin'ny mety hisian'ny fijinjana mololo mahazatra. Ny tsy fahampian'ny phosphore sisa amin'ny lohataona, aorian'ny fialan'ny zavamaniry amin'ny ririnina, dia mampihena be ny vokatra amin'ny ankapobeny, ary mety hidina ho aotra ny vokatra voa.
Ny fandanjalanjana ny phosphore sy ny azota amin'ny sakafo mineraly ny zavamaniry dia miankina betsaka amin'ny fananana synergistic ny singa. Ny sakafo ammonium amin'ny zavamaniry dia manangona phosphore bebe kokoa noho ny sakafo nitrate. Mandritra izany fotoana izany, ny mosary phosphore dia manemotra ny fampiasana azota amin'ny zavamaniry, izay mitarika amin'ny fanangonana ny nitrogen nitrate amin'ny vokatra.
Zava-dehibe ihany koa ny fifandanjan'ny potasioma sy azota. Amin'ny hanoanana potasioma, ny azota dia tsy ampiasaina amin'ny fomba feno, indrindra raha ny amoniaka no loharanony. Ny potasioma dia tompon'andraikitra amin'ny fanangonana ny habetsaky ny akora plastika voatahiry ao amin'ny zavamaniry alohan'ny hibernation, indrindra fa ny siramamy. Ny tahiry dia ilaina amin'ny fananganana ny fanoherana ny adin-tsaina amin'ny voly ririnina. Ny fatra feno zezika potash dia tsy maintsy omena ny zavamaniry amin'ny fampiharana mialoha ny famafazana.
Ny sakafo azota dia tokony omena mandritra ny vanim-potoanan'ny fitomboana, noho ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fahamaizan'ny singa ao amin'ny tany. Saingy zava-dehibe ny mitadidy fa ny sakafo azota alohan'ny famafazana tafahoatra dia miteraka fitomboan'ny zavamaniry mahery vaika sy kirihitra matanjaka. Ny fanangonan-karena haingana ny faobe eny ambonin'ny tany, miaraka amin'ny fahatarana amin'ny fananganana ny rafitry ny fakany, dia mitarika ho amin'ny fahasimbana amin'ny fanamafisana ny zavamaniry alohan'ny ririnina, ny fitomboan'ny fahasimban'ny mololo amin'ny aretina fungal, ny fipetrahan'ny voa ary ny fihenan'ny vokatra voa.
Ny fametrahana ny fijinjana voa dia mitranga amin'ny lohataona, mandritra ny vanim-potoana manomboka amin'ny fambolena ka hatramin'ny ravina saina. Ao amin'ny dingana famafazana dia miforona ny tifitra fanampiny - ny fitambaran'ny tady mamokatra. Avy eo, amin'ny dingana fidirana amin'ny fantsona dia miforona ny spikelets. Ao amin'ny dingana ravin'ny sainam-pirenena dia voafaritra ny isan'ny voa ao anaty spikelet, ary aorian'ny voninkazo dia mitombo ny caryopsis. Ireo dingana rehetra ireo dia mitaky famatsiana azota sy insolation masoandro ampy.
Ny famoronana fepetra tsara ho an'ny fampandrosoana ny voly ririnina amin'ny fararano dia manampy amin'ny fampiasana tsara kokoa ny hamandoana sy ny tahirin-tsakafon'ny zavamaniry amin'ny lohataona. Miaraka amin'ny fiantombohan'ny hafanana maharitra, dia mampitombo haingana ny fatran'ny zavamaniry izy ireo ary mijaly noho ny hain-tany amin'ny lohataona. Miaro azy amin’ny rivotra maina koa ny fahamasahan’ny voly ririnina.
Rehefa miala amin'ny ririnina dia mihamalemy ny zavamaniry ary mora voan'ny pathogens sy fungal aretina. Ilaina ny manao akanjo am-piandohan'ny lohataona mikendry ny fanatsarana ny fitomboan'ny zavamaniry, ny fampandehanana ny fizotran'ny fanavaozana. Ny fakan-tsakafo mahomby indrindra dia manentana ny fitomboan'ny rafitra faka faharoa sy ny fanangonam-bozaka vegetative. Ny otrikaina avy amin'ny tany avy amin'ny rafitra fakan-kazo eo amin'ny xylem dia miakatra hatrany amin'ny ravina, izay atsofohy sy amboarina ho zavatra organika, aorian'izay dia lasa sakafo izy ireo, ary miverina amin'ny rafitra faka amin'ny fikorianan'ny rivotra. Noho izany, ny voly amin'ny ririnina dia mamaly tsy amin'ny zezika azota amin'ny lohataona, fa amin'ny phosphore koa, izay miantoka ny fakana ny zavamaniry ary manatsara ny fananganana ny rafitra faka faharoa. Ny famafazana foliar sy fakan-kazo mahomby indrindra amin'ny ammonium ortho- sy polyphosphates avy amin'ny zezika APALIQUA® NP 11:37 (ZhKU). Ny akanjo ambony amin'ny voly varimbazaha ririnina APALIQUA® NP 11:37 (ZhKU) amin'ny vanim-potoan'ny fanangonam-bokatra dia hanampy amin'ny fitomboan'ny coefficient fikajiana, ny fanangonam-bozaka, ary ny fananganana voa tsara indrindra, izay mampitombo ny vokatra. .
Mba hiantohana ny fampandrosoana ara-dalàna ny voly varimbazaha ririnina, ny tany dia tsy maintsy misy solifara, magnesium, manganese, zinc, boron, varahina ary singa hafa. Ny fandinihana dia manaporofo fa ny fanomezana zavamaniry varimbazaha amin'ny ririnina miaraka amin'ny habetsaky ny meso- sy ny microelements ilaina dia nampitombo ny vokatra voamaina tamin'ny 0,32-0,47 t / ha ary ny votoatin'ny proteinina 1-2%.
Koa satria ny fiasan'ny meso- sy ny microelements dia mikendry ny fananganana fanoherana ny pathogens sy ny lalana tsara amin'ny dingana vernalization, tsara kokoa ny mampiditra microelements ao anaty tany ho ampahany amin'ny zezika mineraly maharitra maharitra. Ny iray amin'ireo tombony azon'izy ireo dia ny famatsiana mivantana ireo singa trace amin'ny rafitry ny fakan'ny zavamaniry. Izany, voalohany indrindra, dia manilika ny tsy fahampian'ny singa trace mandritra ny vanim-potoanan'ny fitomboana sy ny vanim-potoana mety hisian'ny adin-tsaina. Ankoatra izany, ny hain-tany amin'ny atmosfera dia mampihena ny turgor amin'ny selan'ny zavamaniry. Miaraka amin'ny tsy fahampian'ny hamandoana intracellular, ny sira mifantoka amin'ny firafitry ny zezika micronutrient mandritra ny famahanana foliar dia mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny zavamaniry - miteraka adin-tsira. Ary koa, ny fampiasana ny akanjo foliar mandritra ny hain-tany dia mety hiharatsy ny toerana misy ny zavamaniry noho ny fampahavitrihana ny photosynthesis, izay manampy amin'ny fampidirana siramamy mavitrika. Saingy ny tsy fahampian'ny hamandoana dia mametra ny hetsika anatiny, izay miteraka "jam" siramamy, manakana tanteraka ny fizotran'ny metabolika ao amin'ny zavamaniry.
Ankehitriny ny tsipika mineraly zezika vokarin'ny PhosAgro dia manana marika mihoatra ny 50. Ny zezika dia mety ahitana otrikaina 2 ka hatramin'ny 8. Ny granule tsirairay dia misy otrikaina ao amin'ny ratio voalaza.
Ho an'ny fakan-tsakafo fototra amin'ny voly ririnina rehefa mamafy amin'ny fararano, dia manoro hevitra ireo marika misy phosphore sy potassium avo lenta izahay:
APAVIVA®+ NPK (S) 10:26:26 (2) + B sy NPK (S) 10:26:26 (2) + Zn,
APAVIVA®+ NPK (S) 8:20:30 (2) + B sy NPK (S) 8:20:30 (2) + Zn,
APAVIVA®+ NPK (S) 15:15:15 (10) + B sy NPK (S) 15:15:15 (10) + Zn,
Bebe kokoa momba ny zezika mineraly PhosAgro:
Tags: "PhosAgro"sakafo mahavelonavoly ririnina
Fijinjana 2020: Maninona no mijaly ny tantsaha Okrainiana